केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: जीवन काँडा कि फूल
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 11:23 AM
मनु जी झमक दिदी अपाङ्ग हुनुहुन्छ र उहाँले लेख पढ गर्न सक्नु हुन्छ भन्ने कुरा मैले फेसबुकको मेरो साथी मनोज बाट थाहा पाए पनि उहाँ एउटा महान साहित्यकार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको थियीन तर आज तपाईंले जानकारी गर्नु भएकोमा लाखौंलाख धन्यवाद ! यस्ता बिषय बस्तुहरु सेयर गर्दै गर्नु होला ल ।
बधाई छ मनु जी लाइ एउटा असल समालोचक को दर्जामा आफुलाई उभ्याउन सक्नु भएकोमा !
राम्ररि नै 'जीवन काँडा कि फुल' को थोरै प्रसंगहरुलाई लिएर भए'नी मिठो सार प्रस्तुत गर्नु भएको छ !
तपाइको लेखाइ हेर्दा तपाइले निकै निको मानेर अन्तरमन देखि नै पढ्नु भएको जस्तो लाग्यो ! र मलाइ नी यो पुस्तक एक पटक पढ्नै पर्ने जस्तो लाग्यो !
आफ्नो ब्यस्त समयको एक भाग छुट्टाएर मलाइ समेत हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा साथीहरुलाइ धेरै धेरै धन्यवाद । डि बि ज्यु उहा त एक स्तभकार साथै साहित्यकार हुनुहुन्छ । उमेश जि सके सम्म पडनुहोस मैले यहा त केही एक अशँ मात्र हो यहा उनान्नसय अँश छुटेको छ साह्रै मर्म स्पर्सी लेखहरु छन् ।
मर्मस्पर्शी छ, अर्पण, अष्ट्रेलिया
my blog post - football kit £99
Kali Bdr S said...
Really good upnyass